स्वस्थ रहन एकैसाथ खानुपर्ने पौष्टिक तत्वहरु के के हुन् ? | mulkhabar.com
स्वस्थ रहन एकैसाथ खानुपर्ने पौष्टिक तत्वहरु के के हुन् ?
December 28, 2017 | 10:31 pm 186 Hits
कतिपय भिटामिन र खनिजले बेग्लाबेग्लै काम नगरी एकसाथ काम गर्छन्। कतिपय अवस्थामा भने एउटाको प्रभावलाई अर्कोले प्रभावहीन बनाउँछ। त्यसैले हामीले भिटामिनरखनिजका चक्कीरक्याप्सुल खानुभन्दा भिटामिनरखनिजयुक्त भोजन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। किनभने भोजनमा एउटा मात्र नभएर विभिन्न पोषक तत्व वा भिटामिनरखनिज पाइन्छ, जसले आपसमा प्रतिक्रिया गर्छन् वा एकसाथ काम गर्छन्। एकसाथ काम गर्ने पोषक तत्व निम्नानुसार छन्ः
अहिले हामीलाई भिटामिन डीको दैनिक मात्रा अपुग भएकाले बढाउनुपर्ने वा नपर्नेमा बहस चलिरहेको छ। अधिकांश आधिकारिक स्वास्थ्य निकायले नै वयस्कका लागि दैनिक १ हजार मिलिग्राम क्याल्सियम र ४ सय आइयू ९इन्टरनेसनल युनिट० भिटामिन डी आवश्यक भएको बताउन थालेका छन्।
सोडियम शरीरका लागि अत्यावश्यक पोषक तत्व हो। तर, यसको बढी सेवनले रक्त वाहिनी नली खुम्चिने र फैलने प्राकृतिक क्षमता अवरुद्ध गर्छ र रक्तचाप बढाउँछ। उच्च रक्तचाप उच्च भए हार्टफेल र मस्तिष्कघातको जोखिम बढाउँछ। अधिकांश अमेरिकीले आवश्यकभन्दा बढी मात्रामा सोडियम ९नुनका रूपमा० दैनिक उपभोग गरिरहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
भिटामिन बी १२ र फोलेट ९भिटामिन बी समूहको एउटा भिटामिन० ले एकसाथ काम गर्छन्। भिटामिन बी १२ ले फोलेट पचाउन शरीरलाई सघाउँछ। दुवैले कोष विभाजन र कोष वृद्धिमा एकसाथ सघाउछँन्। यी दुवै पोषक तत्व बाल्यावस्था र युवावस्थामा बढी महत्वपूर्ण छन्, किनभने त्यसबेला शारीरिक तथा मानसिक विकास हुन कोष विभाजन र कोष वृद्धि प्रक्रिया सबैभन्दा बढी हुन्छ। यसबाहेक हाम्रो पेट र कपालका कोषहरू प्रायजसो विभाजन र वृद्धि भइरहेका हुन्छन्।
मासु, अन्डा र दूधमा पर्याप्त मात्रामा भिटामिन बी १२ पाइन्छ। हरिया सागसब्जी, गेडागुडी ९बोडी, सिमी आदि० मा फोलेट प्राकृतिक रूपमा पाइन्छ।
फोलिक एसिड वा मल्टिभिटामिनको चक्कीरक्याप्सुलले फोलेटको कमी पूरा गर्न सकिन्छ। भिटामिन बी १२ को कमी भने केही समय इन्जेक्सन वा चक्कीरक्याप्सुल खाएर पूरा गर्न सकिन्छ।
जिंक–कपरको अन्तर्क्रियाको सम्बन्ध दृष्टिसम्बन्धी एउटा विशेष अवस्थासँग जोडिएको छ। ‘माकुलर डिजेनेरेसन’ भनिने यो अवस्थामा दृष्टि धमिलो हुन्छ। यसलाई एआरएमडी ९एज रिलेटेड माकुलर डिजेनेरेसन० पनि भनिन्छ। यसले अन्ततः दृष्टिविहीन बनाउँछ। यस्तो अवस्थामा बिरामीलाई भिटामिन र खनिज एकसाथ दिइन्छ, जसलाई ‘एआरइडिएस’ भनिन्छ। भिटामिन र खनिज मिसाएर गरिने सेवनले एआरएमडीलाई छिटो बढ्न दिँदैन।
नाइसिन पनि भिटामिन बीमध्येको एउटा भिटामिन हो। पुरुषलाई दैनिक १६ माइक्रोग्राम र महिलालाई १४ माइक्रोग्राम नाइसिन चाहिन्छ। नाइसिनको कमीले पेलाग्रा, झाडापखाला र डिमेन्सिया ९विस्मृति० जस्ता रोग लाग्छन्। यसैगरी, ट्रिप्टोफ्यान एउटा एमिनो एसिड हो र यो नाइसिनको स्रोत पनि हो। त्यसैले नाइसिनको कमी पूरा गर्न ट्रिप्टोफ्यान प्रसस्त पाइने खानेकुरा खानुपर्छ।
कुखुराको मासु, टर्कीको मासु, रातो मासु, माछा, अन्डा, विभिन्न बदाम, सूर्यमुखीको बीउ, फर्सीको बीउ, चकलेट, ओट ९जौको चिउरा०, सुक्खा फलफूल÷छोगडा, दूध, दही र चिज लगायत खानेकुरामा प्रशस्त ट्रिप्टोफ्यान पाइन्छ।
–स्वास्थ्य खबरबाट साभार